HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chol Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Ourdou Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tiorka Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Manana toeram-pambolena sy fiompiana maromaro ny Vavolombelon’i Jehovah, any amin’ny 145 kilaometatra any avaratr’i New York, tanàna kely any akaikin’i Wallkill. Tena manampy azy ireo hamita ny fampianarana Baiboly ataony maneran-tany ireo toerana ireo. Antsoina hoe Watchtower Farms izao izy ireo, ary tamin’ny 2 Janoary 1963 no nividianana ny voalohany, izany hoe 50 taona lasa izay.
Anisan’ny Vavolombelon’i Jehovah voalohany niasa tao Wallkill i David Walker. Hoy izy, nanazava ny antony nividianana an’ilay toeram-pambolena voalohany: “Nitombo be ny mpiasa tao amin’ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah tao Brooklyn, any New York. Nila nitady hevitra àry izahay hisahanana ny sakafon’izy ireo nefa mitsitsy vola. Efa nanana toeram-pambolena hafa ny Vavolombelon’i Jehovah tany New York avaratra. Adiny 6 ka hatramin’ny adiny 8 eo ho eo avy eo Brooklyn anefa no nisy an’ilay izy. I Wallkill kosa adiny 2 monja avy eo Brooklyn. Tena tao amin’ny nilanay azy tsara àry io toerana io.” Lasa namboly voankazo sy legioma tao ny Vavolombelon’i Jehovah sady niompy kisoa sy omby ary akoho amam-borona. Nanamboatra sakafo vita tamin’ny ronono koa izy ireo. Niampy ireo toeram-pambolena sy fiompiana ireo tatỳ aoriana.
Nitombo be ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany tao anatin’ny folo taona, ka nanjary nisy fandrosoana be koa tao Wallkill. Sady mijinja ny zavatra nambolena tao izy ireo no manao an’ilay asa fijinjana hafa noresahin’i Jesosy, ka mamoaka boky sy gazety. (Matio 9:37; Lioka 10:2; Jaona 4:35, 36) Ireto misy santionany amin’ny asa efa natao tao Wallkill.
Fanontam-pirinty: Ny trano fanontam-pirinty tany Brooklyn, any New York no nanao pirinty ny ankamaroan’ny boky sy gazety ara-baiboly navoakanay, tamin’ny 1950 tany ho any. Tsy naharaka intsony anefa ny tany Brooklyn tatỳ aoriana, satria nitombo be ny olona mangataka boky sy gazety. Nanamboatra trano fanontam-pirinty fanampiny tany Wallkill àry ny Vavolombelon’i Jehovah ka tamin’ny 1973 ilay izy no vita. Nanomboka tamin’izay dia nitarina imbetsaka ireo trano fanontam-pirinty, ary vao tamin’ny 2004 no nanaovana an’izany farany.
Fampiasana ordinatera: Nanamboatra programan’ordinatera vaovao ny Vavolombelon’i Jehovah vitsivitsy tao Wallkill tamin’ny 1979, ary antsoina hoe Fandaharana Elektronika Famoahana Boky sy Gazety Amin’ny Fiteny Maro (MEPS) izy io. Ahafahana mamoaka boky sy gazety ara-baiboly amin’ny fiteny 600 mahery io programa io.
Fampianarana: Natao tany Brooklyn ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada taloha. Nafindra tany Wallkill anefa izy io tamin’ny 1988, ary ny 17 Oktobra no natomboka ny sekoly voalohany tany. Nafindra tany amin’ny Foibem-pampianaran’ny Tilikambo Fiambenana any Patterson, any New York, avy eo ilay sekoly tamin’ny Aprily 1995.
Nandroso be sy nihatsara foana ny Watchtower Farms sy ireo toeram-pambolena sy fiompiana hafa, nandritra izay 50 taona lasa izay. Mbola miezaka foana anefa izahay hanatsara ny sakafo homena ny Vavolombelon’i Jehovah miasa any amin’ny Betelan’i New York, any Etazonia.
Mbola manorina birao vaovao sy trano fonenana ary trano hafa any Wallkill izao ny Vavolombelon’i Jehovah. Manavao an’ireo trano sasany koa izao izy ireo. Mitombo be ny olona lasa Vavolombelon’i Jehovah any amin’iny faritra iny, ka ireo asa rehetra ireo no hanampy ny Watchtower Farms mba hamokatra sakafo ara-panahy foana ho an’ireny olona ireny.
Hoy ihany i David Walker: “Faly be mihitsy aho nahita ny fandrosoan’ny asa teto Wallkill nandritra izay 50 taona lasa izay. Trano vitsivitsy fotsiny no teto tamin’ny voalohany nefa lasa nitatra be ilay izy sady tena nanampy mba hahafahana hampianatra Baiboly ny olona maneran-tany.”
Mandeha tsara ny fanorenana ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Etazonia satria miasa mafy ireo mpiasa an-tsitrapo.
Fantaro hoe nahoana ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah no nifindra tany New York, ary nahoana no antsoin’izy ireo hoe Betela ny foibeny.